SAMPANAN’NY DIGY - LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Olona iray namoy ny ainy, roa hafa naratra mafy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina indray tetsy amin’ny “route-digue”, ny alatsinainy alina lasa teo, ka olona iray hatreto no fantatra fa namoy ny ainy ary ny roa hafa kosa dia mbola miady amin’ny fahafatesana amin’izao fotoana izao. 13 septembre 2017
Araka ny tatitra voalazan’ny nanatri-maso teny an-toerana dia teo amin’ny lalam-baovao sampanana “rocade” no niseho ny loza rehefa tsy nahita ilay fiviliana. Marihana fa fiara “Toyota V8” ity niharan-doza ity ary olona telo no tao anatiny. Potika tanteraka mihitsy ilay fiara ka tsy nisy noraisina intsony.
Raha ny vinavinan’ireo nanao ny fizahana manoloana ny zava-nitranga dia karazany nandeha mafy ny mpamily ka tsy nahita ny fiviliana intsony. Porofon’izany ny fahitana ny hafainganam-pandehan’izy ireo niraikitra teo amin’ny 120 km isan’ora. Raha tsiahivina kely anefa dia mbola vao tamin’ny 24 aogositra lasa teo no nisy lozam-piarakodia teo amin’io toerana io ihany ary namoizana ain’olona miisa roa. Izao sahady indray dia efa loza mahatsiravina no niseho.
Mametra-panontaniana araka izany ireo mpanara-baovao noho ny amin’ny fifanesen’ny loza eo amin’io toerana io satria dia misy ireo milaza na mitsaho fa mety ho misy lolo ny lalana ka izay no antony akany olona matetika. Tsy voatery ho izay ihany no mety ho antony fa ny tsy fitandreman’ny mpampiasa lalana sy ireo mpamily no ankabeazan’ny fototry ny loza eto an-drenivohitra na ny any amin’ny faritra.